VaTsvangirai Voita Misangano neVatungamiri veNyika dzemuSADC
Sunday, May 26, 2013 Local time: 00:21
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vaparura rwendo rwekusangana nevatungamiri venyika dzemuSADC pamberi pemusangano weSADC Summit uri kuitwa kuMozambique svondo rinouya.
Musangano uyu uchazeya nyaya yeZimbabwe. VaTsvangirai, avo vasina kupinda mudare remakurukota rinoitwa Chipir choga choga, vari kuMozambique uko vange vachitarisirwa kuita musangano nemutungamiri wenyika iyi, VaArmando Guebuza, avo vari kutora chigaro chemutungamiri weSADC.
Vachibva kuMozambique, VaTsvangirai vari kunanga kuTanzania uko vachaita musangano nemutungamiri wenyika iyi, VaJakaya Kikwete. VaKikwete ndivo vari kutora chigaro chasachigaro weSADC Troika.
VaTsvangirai vari kutarisirwa kutaura nezvamamiriro akaita zvinhu munyika zvikuru nyaya yebumbiro remitemo nemitemo ine chekuita nesarudzo. Musangano weSADC uchaitwa musi wa17 na18 Nyamavhuvhu uye uchatarisa nyaya dzakaita semamiriro ezvinhu muZimbabwe, muDemocratic Republic of Congo, neMadagascar.
Vamwe vakuru muSADC vaudza Studio 7 kuti vacharumbidzawo European Union iyo yakati inogona kubvisa zvirango zvakatemerwa Zimbabwe izvo vanoti zviri kukanganisa hupfumi hwenyika.
Chipangamazano cheInternational Crisis Group kuchamhembe kweAfrica, VaTrevor Maisiri, vanoti SADC ichiri yakakosha mukugadzirisa nyaya yeZimbabwe.
Zvichakadaro, nyaya yebumbiro remitemo iri kutarisirwawo kutsviriridzawo kuSADC sezvo vakaoma musoro muZanu-PF vari kuti bato iri risatambire gwaro rebumbiro remitemo .
Mutauriri weZanu-PF, VaRugare Gumbo, vanoti dare repamusorosoro rebato ravo richasangana neChitatu kuti ribude nechisungo panyaya iyi.
Most PopularMost ViewedVaTsvangirai Vanoti Bato Ravo Richakunda MusarudzoVakuru veMauto neMapurisa Voramba Vachinetsana neMDCZanu-PF Yoyedza Kugadzirisa Bopoto kuMasvingoMusori Akapfura VaKombayi Akaregererwa naVaMugabe AnoshayaSupreme Court Youdzwa Maipiro Akaita Kamba yeHarare Central RSSMail SubscriptionMobile